Accueil > Gazetin'ny nosy > Polisim-pirenena : Nanome lesona ireo mpandoto tanàna
Polisim-pirenena : Nanome lesona ireo mpandoto tanàna
Porofon’ny fanompoana vahoaka ny anjara goavana nasehon’ny polisim-pirenena malagasy ny alarobia 19 janoary 2022 teo, tamin’ny fanadiovana ny lakan-dranon’Andriantany eny Tsaramasay. Ho fisorohana ny fiakaran’ny rano no nanalana ireo tsikafonkafona nivangongo ela sy ny fako miaraka amin’ny diky sy amany narian’ireo mponina eny isan’andro. Izany dia notarihan’ny Contrôleur Général de la Police Randrianarison Fanomezantsoa, minisitry ny filaminana anatiny, ka nitenenany hoe « Tsy ny manenjika olon-dratsy ihany no andraikitry ny polisy , fa rehefa tonga koa ny andro sarotra dia afaka mifanampy sy mifanome tanana amin’ny vahoaka izy ».
Ny nahalasa fisainana dia ireo mponina eny an-toerana izay tsy mba nisy nitsetra na nanolo-tanana an’ireto polisy marobe sahy nijoboka tanatin’ity lakan-drano niandronan’ny loto rehetra ity. Toa nitazam-potsiny azy ireo kanefa dia ny mponina amin’iny toerana iny no tena tsy mandray andraikitra ho amin’ny fitandroana ny fahadioavan’ny tanàna manodidina.
Tena ilaina ny fanovana ny toe-tsaina eny amin’ny isam-batan’olona. Nahoana no iandrasana olon-kafa ny fahadioavan’ny tanàna onenanao mandavantaona? Olombelona manana ny hasiny daholo ny malagasy tsirairay kanefa dia nisolo vaika ny an-kalana tamin-kitsim-po ireto polisim-pirenena nanaraka ny baiko tsy maintsy niantsorohany.
Fifidianana ben’ny tanàna tsy vita : Avereno ny volan’ireo kandida
Rn-13 : Tsy mazava ny famatsiam-bola
Fetim-pirenena : Be ny olona manadino ny tantara
Ry mpitatitra UCTU : Atsaharo ny fampiakarana saran-dalana
Mahajanga : Naharitra ora 12 ny delestazy